Iprofayile yekhampani - Chengdu Ruibo Technology Co., Ltd.
Inkampani ehambele phambili kwezobuchwephesha, gxila kwiifoto ze-oblique, uqhubeke nokwenza izinto ezintsha.
Fumanisa malunga nembali yenkampani yethu kunye nabantu abasemva kwayo.
Masibuyele umva ixesha libuyele ku-2011, umfana osandula ukuphumelela isidanga se-Master kwiYunivesithi yaseMazantsi Jiaotong, unomdla omkhulu kwiimodeli zedrone.
Upapashe inqaku elibizwa ngokuba yi "Stability of Multi-Axis UAVs", ethe yabamba unjingalwazi odumileyo waseyunivesithi.Uprofesa uthathe isigqibo sokuxhasa ngezimali uphando lwakhe malunga nokusebenza kweedrone kunye nokusetyenziswa, kwaye akazange amphoxe unjingalwazi.
Ngelo xesha, isihloko se "Smart City" besele sishushu kakhulu e-China. Abantu bakha iimodeli ze3D zezakhiwo ikakhulu zixhomekeke kwiihelikopta ezinkulu ezineekhamera ezinesisombululo esiphakamileyo (esifana nesigaba sokuqala se-XT kunye ne-XF).
Olu manyano luneengxaki ezimbini:
1. Ixabiso libiza kakhulu.
2. Zininzi izithintelo kwiinqwelomoya.
Ngophuhliso olukhawulezayo lwetekhnoloji yedrone, iidrones zorhwebo zangenisa ukukhula okuqhumayo ngo-2015, kwaye abantu baqala ukuphonononga iindlela ezahlukeneyo zokusebenzisa iidrones, kubandakanya netekhnoloji "yokufota oblique"
Ukufotwa kwe-Oblique luhlobo lweefoto zasemoyeni apho i-eksisi yekhamera igcinwe ngabom ithambekile ukusuka kwicala elime nkqo. Iifoto, ezithathiweyo, ziveza iinkcukacha ezifihliweyo ngeendlela ezithile kwiifoto ezimileyo.
Ngo-2015, lo mfana wadibana nomnye umntu owayeqokelele iminyaka emininzi yamava kwicandelo lokuhlola kunye nokwenza imephu, ke bagqiba kwelokuba bafumane inkampani egxile ekufotweni kwe-oblique, egama linguRAINPOO.
Baye bagqiba kwelokuba baphuhlise ikhamera yeelensi ezintlanu eyayikhaphukhaphu kwaye incinci ngokwaneleyo ukuba ingaqhutywa kwi-drone, kuqala bavele badibanisa ii-SONY A6000 ezintlanu, kodwa kuyacaca ukuba ukudityaniswa okunjalo akunakufezekisa iziphumo ezilungileyo, kusenzima kakhulu, kwaye ayinakuqhutywa kwidrone ukwenza imisebenzi yokuchaneka okuphezulu.
Baye bagqiba kwelokuba baqale indlela yabo entsha ukusuka ezantsi. Emva kokufikelela kwisivumelwano kunye no-SONY, basebenzise iisony zikaSony ukwenza iilensi zabo ezibonakalayo, kwaye le lensi kufuneka ihlangane nemigangatho yolu phando kunye neemephu zeshishini.
I-Riy-D2: umhlaba's Inqindi yekhamera ye-oblique ethi ngaphakathi kwe-1000g (850g), iilensi ezibonakalayo zenzelwe ngokukodwa uphando kunye nokwenza imephu.
Oku kube yimpumelelo enkulu. Ngo-2015, bathengisa ngaphezu kweeyunithi ezingama-200 ze-D2. Uninzi lwazo lwaluqhutywa kwiidrones ezininzi zerotor kwindawo encinci yemodeli ye3D. Nangona kunjalo, ngenxa yesikali esikhulu esinezakhiwo eziphezulu zemodeli ye-3D, i-D2 ayinakuyigqiba.
Ngo-2016, i-DG3 yazalwa. Xa kuthelekiswa ne-D2, i-DG3 iye yakhanya yancipha kwaye incinci, ngobude obude obugxile, ubuncinci bexesha lokuvezwa li-0.8s kuphela, ngokususa uthuli kunye nemisebenzi yokutshisa ubushushu ... Indawo yemodeli ye-3D yemisebenzi.
Kwakhona, iRainpoo ikhokele imeko ebaleni lokuhlola kunye nokwenza imephu.
I-Riy-DG3: ubunzima be-650g, ubude obugxile kwi-28/40 mm, ubuncinci bexesha lokuvezwa kwexesha li -0.8s kuphela.
Nangona kunjalo, kwiindawo eziphakamileyo ezisezidolophini, imodeli ye-3D iseyinto enzima kakhulu. Ngokungafaniyo neemfuno zokuchaneka okuphezulu kwicandelo lophando kunye nokwenza imephu, indawo ezininzi zesicelo ezinje ngeedolophu ezifanelekileyo, amaqonga e-GIS, kunye ne-BIM zifuna iimodeli eziphezulu ze-3D.
Ukusombulula ezi ngxaki, ubuncinci amanqaku amathathu kufuneka afezekiswe:
1. Ubude obude obude.
2. Iipekseli ezingaphezulu.
3. Ixesha elifutshane lokuveza.
Emva kokuphindwaphindwa okuhlaziyiweyo kwemveliso, ngo-2019, i-DG4Pros yazalwa.
Ikhamera ye-oblique enesakhelo esigcweleyo ngokukodwa kwimodeli ye-3D yemimandla ephezulu yokuphakama kwedolophu, eneepikseli ezingama-210MP zizonke, kunye nobude obugxile kwi-40 / 60mm, kunye ne-0.6s yexesha lokuvezwa kwexesha.
I-Riy-DG4Pros: Isakhelo esigcweleyo, ubude obugxile kwi-40/60 mm, ubuncinci bexesha lokuvezwa kwexesha li-0.6s kuphela.
Ikhamera ye-oblique enesakhelo esipheleleyo ngokukodwa kwimodeli ye-3D yeendawo eziphakamileyo ezisezidolophini, ezineepikseli ezingama-210MP zizonke, kunye nobude obugxile ku-40 / 60mm, kunye ne-0.6s yexesha lokuvezwa kwexesha.
Okwangoku, inkqubo yemveliso yeRainpoo igqibelele kakhulu, kodwa indlela entsha yaba bantu ayikapheli.
Bahlala befuna ukuzigqwesa, kwaye bayenzile.
Ngo-2020, olunye uhlobo lwekhamera ye-oblique eguqula umbono wabantu izelwe-DG3mini.
Ubunzima be-350g, ubukhulu be-69 * 74 * 64, ubuncinci bexesha lokuvezwa kwe-0.4s, ukusebenza okuhle kunye nozinzo ……
Ukusuka kwiqela labafana ababini kuphela, kwinkampani yamazwe aphesheya enabasebenzi abangama-120 + kunye nabasasazi abangama-50 + kunye namaqabane kwihlabathi liphela, ngokuchanekileyo kungenxa yokuthanda kakhulu "ukwenziwa kwezinto ezintsha" kunye nokufuna umgangatho wemveliso owenza ukuba iRainpoo iqhubeke ikhula ngokuqhubekayo .
Le yiRainpoo, kwaye ibali lethu liyaqhubeka ……